မာလာရှမ်းကောစားရင်း အရသာနိဗ္ဗာန်ဘုံဆီ အလည်သွားကြမယ်…….? ? – FoodiesNavi
By yin sandi On March 16, 2018 2
အစားတစ်လိုင်းတို့ စားနေကျ Spicy House ,Chilli Pot တို့ကိုခဏလောက်နားထားပြီး လျှာရမက်ကိုဖမ်းဆုပ်ထားနိုင်တာကြောင့် အခုတလောရေပန်းစားလူကြိုက်များနေတဲ့ စီချွမ်းစတိုင်မာလာရှမ်းကောဆိုင်လေးကို သွားစားကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် review လေးပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်လည်းသူများတွေအရမ်းကောင်းတယ်ပြောလို့သာ သွားစားကြည့်တာ ? စမ်းချောင်းဘက်ကလမ်းသိပ်မကျွမ်းတော့ Google Map ထောက်ပြီးသွားရတဲ့ဘဝ ? အမှန်က ရှမ်းလမ်းမှတ်တိုင်နားကနေ စမ်းချောင်းလမ်းထဲဝင်သွားရင် အနီးဆုံးပဲ။ စမ်းချောင်းလမ်းမပေါ်က မြေနီထပ်တိုက်ခန်းမှာ ဆိုင်ပုံစံပြင်ဆင်ပြီးဖွင့်ထားတာပါ။
ဆိုင်အတွင်းမဝင်ခင်မှာ မာလာရှမ်းကောအတွက် ပါဝင်စေချင်တဲ့အမယ်ပစ္စည်းတွေကို ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး ကောင်တာမှာတစ်ခါတည်းတွက်ပြီးရှင်းလို့ရပါတယ်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အသားလုံးအစုံအလင် ၊ ပင်လယ်စာ ၊ မှို ၊ ရေညှိအရွက်အသီး တော်တော်စုံစုံပြုလုပ်ထားပေမယ့် ဂဏန်းကတော့မရပါဘူး ။ ကိုယ်တွေကတော့ အသားများတာကြိုက်တော့ မာလာရှမ်းကောအတွက် အသားများများလေးရွေးပြီး အကင်လေးတွေရယ် ၊ Thai Tea နဲ့ နဂါးမောက်သီးဖျော်ရည်လေးရယ် မှာဖြစ်တယ်။
မာလာရှမ်းကောထဲထည့်မယ့်ခေါက်ဆွဲကိုတော့ ကန်စွန်းဥခေါက်ဆွဲ ၊ အသီးအရွက်ခေါက်ဆွဲ ၊ ရိုးရိုးခေါက်ဆွဲရှိပေမယ့် ကိုယ်ကတော့ စိမ်းစိမ်းလေးကိုသဘောကျလို့ အသီးအရွက်ခေါက်ဆွဲပဲရွေးမှာဖြစ်တယ်။ အကုန်မှာပြီးသွားတော့ အစပ် ၊ အထုံ ၊ အခြောက် ၊ အရည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပေးဖို့ ကဒ်လေးပေးတယ်။ ကိုယ်ကတော့ သိပ်မစပ်ဘဲစိုစိုလေးစားချင်လို့ ပုံမှန်စပ် ၊ ထုံလတ်နဲ့အရည်နည်းနည်းနဲ့မှာလိုက်တယ်။
ဆိုင်ထဲဝင်သွားတော့ ကိုယ်ကနေပူထဲကလာလို့လားမသိ အေးအေးစိမ့်စိမ့်လေးတော်တော်နေလို့ကောင်းသွားတယ်။ သီချင်းသံငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းလေးလွင့်ပျံနေပြီး ? ? ဆိုင်ရဲ့အပြင်အဆင်ဒီဇိုင်းတွေကလည်း ဓာတ်ဖမ်းချင်စရာကောင်းလောက်အောင် ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန်လေးရယ် ? ? ပြတင်းပေါက်မှန်နေရာလေးတွေမှာ သစ်ရွက်တုလေးကို စိမ်းစိမ်းစိုစိုလေးအလှဆင်ထားတာကြောင့် မျက်စိထဲတော်တော်ပဿာဒဖြစ်မိတယ်။ မှာထားတာလည်းမရသေးတော့ Free ကျွေးတဲ့ ရာသီစာဖရဲသီးလေးစားရင်း စပ်စပ်စုစုနဲ့ပတ်ကြည့်နေတာ သိပ်မကျယ်လှပေမယ့် သပ်ရပ်သန့်ရှင်းတဲ့အပြင်အဆင် ၊ မီးရောင်လှလှလေးတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးရှိလှတယ်။
မှာထားတာ(၁၀)မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ် မာလာရှမ်းကောပန်းကန်ကြီးရောက်လာရော ♨ ♨ အနံ့နဲ့တင်တော်တော်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ပြောရမယ်။ မာလာအနံ့သင်းသင်းမွှေးနေတော့ သွားရည်တွေလည်ချောင်းထဲမှာ ? ? ဂလုဂလုဖြစ်နေလို့ ဓာတ်ပုံတောင်မနည်းရိုက်လိုက်ရတယ်။ ? ? ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အသားလုံးတွေအများကြီးနဲ့ဆိုတော့ အားရပါးရမြည်းလိုက်တာ အရသာခံအာရုံကြီးနိဗ္ဗာန်ဘုံရောက်သွားသလိုပဲ ? ? ဖိုင်းချက်ကတော့လက်လန်တယ်။ ကိုယ်က မာလာရှမ်းကော Crazy မို့ Chilli Pot , Spicy House စတဲ့နာမည်ကြီးဆိုင်တွေအပြင် ဆိုင်တော်တော်များများစားဖူးပေမယ့် လျှာခံတွင်းထဲကနေ နှလုံးသားထဲထိ ? ထိရှသွားတာ ဒီတခါပဲရှိသေးတယ်။ အစပ်အထုံ Level ကွက်တိကျသလားတော့ မေးမနေနဲ့ အသား ၊ ခေါက်ဆွဲ ၊ အသီးအရွက်တွေထဲထိ အရသာတွေစိမ့်ဝင်နေသလားထင်မှတ်ရအောင် ချက်ပြုတ်ထားတဲ့လက်ရာတွေက ရှယ်ကောင်းလွန်းနေပါတယ်။ မာလာအရသာအရည်လေးတွေကို တရွှတ်ရွှတ်သောက်လိုက် စားလိုက်နဲ့လျှာစည်းစိမ်ကို အပြည့်အဝခံစားရစေပါတယ်။
မာလာရှမ်းကောထဲက ဝက်လုံးသားလုံးကို ကိုယ်တော်တော်လေးခိုက်သွားတယ်။ မာကျစ်ကျစ်ကြီးမဟုတ်ဘဲ အိအိစက်စက်လေးဖြစ်နေပြီး ကိုက်လိုက်တာနဲ့ယိုဖိတ်ကျလာတဲ့ အရသာအရည်တွေက ထပ်ကာတလဲလဲကိုက်စားချင်လာအောင် စားလေကြိုက်လေပဲ ။ နောက်တစ်ခါ မာလာရှမ်းကောလာစားဖြစ်ရင်တော့ အသားလုံးဆို ဝက်သားလုံးကြီးမှာပစ်မယ် စားလို့မဝနိုင်လို့ ? ? ။
Number One မှာရနိုင်တဲ့အကင်တွေထဲက ဝက်သုံးထပ်သားထဲမှာ အပ်မှိုထည့်လိပ်ထားတဲ့အကင်လေးတော့ မဆိုးဘူးပြောရမယ်။ ဝက်သားရဲ့အီစိမ့်တဲ့အရသာတွေကို အပ်မှိုကစုပ်ယူထားသလို မအီဘဲစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်။ ကျန်တဲ့အကင်တွေကတော့ မာလာရှမ်းကောစားပြီး ဗိုက်ကားနေလို့လားတော့မသိ သိပ်မကြိုက်ဘူးရယ်။ ဝက်အူကတော့ မကြိုက်ဆုံးပဲ ခြောက်ကပ်ကပ်ကြီးပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ကြီးနဲ့ ကင်ထားတာအရသာမဝင်သလိုပဲ။ ကိုယ့်ခံတွင်းနဲ့တော့ သိပ်မကိုက်ဘူးပြောရမယ်။
ဒီဆိုင်မှာ Thai Tea ကတော့ တန်လည်းတန်ကောင်းလည်းကောင်းတယ်။ ချိုချိုအေးအေး Tea အရသာလေးကို ဆိမ့်ဆိမ့်လေးဖျော်ထားတော့ ရင်ထဲအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေးစီးဝင်သွားသလို ခံစားရစေတယ်။ နဂါးမောက်သီးဖျော်ရည်ကတော့ လှည်းတန်းကဖျော်ရည်လှည်းတွေမှာ ရောင်းတာလောက်တောင် ကိုယ်မကြိုက်ဘူး ။ အချိုနည်းပြီးစိမ်းရွှေရွှေအနံ့က တော်တော်ကိုစူးတယ်။ စျေးနှုန်းကလည်း Thai Tea ရဲ့နှစ်ဆပေးရပြီး Thai Tea လောက်တောင်မဖိုင်းဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။
အားလုံးခြုံပြောရရင်တော့ မာလာရှမ်းကောအရသာက လုံးဝအနှိုင်းမဲ့ပဲ စားဖူးသမျှထဲကိုယ့်လျှာနဲ့ ထပ်တူအကျဆုံးပဲ။ တခြားဆိုင်တွေလို အနှစ်ဖိုးပေးစရာမလိုဘဲ အသားလုံးတွေအများကြီးရှယ်မှာတာတောင် ၃ ယောက်အဝစားကို ၂သောင်းနီးပါးလေးပဲကျတယ်ဆိုတော့ တော်တော်ကြီးတန်တယ်ပြောလို့ရတယ်။ Thai Tea ကလည်း တစ်ခွက်ကို ၁ထောင်ပဲပေးရပြီး တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ အာ့တော့ ဒီဆိုင်လေးကိုသွားစားဖြစ်မယ်ဆိုရင် မာလာရှမ်းကောနဲ့ Thai Tea လေးပဲမှာစေချင်တယ်။ ဒါဆိုရင် ၃ယောက်စာကို ၂သောင်းလောက်နဲ့ ဗိုက်ကားသွားစေမှာအသေအချာပါပဲ။
ဆိုင်လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၄၆) ၊ စမ်းချောင်းလမ်း ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းချောင်းလမ်းဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းကားပါကင်ကတော့ သိပ်အဆင်မပြေလှပါဘူး။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ နေ့လည် (၁၁)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်သွားတဲ့အချိန်က ညနေ(၃)နာရီခွဲလောက်ဆိုတော့ လူတော်တော်ရှင်းတယ်ထင်နေတာ ညနေ(၅)နာရီလောက်ကျမှ စားသုံးသူတွေတဖွဲဖွဲရောက်လာကြတာ။ ဒီတော့ သွားစားမယ်ဆိုနေ့လည်ခင်းဆို ပိုပြီးအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုယ် Toilet သွားရင်းစပ်စုလိုက်တာက အပေါ်ထပ် ထပ်ခိုးမှာလည်းဆိုင်နေရာတိုးချဲ့ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်တဲ့။ ? ?
Number One ကတော့ မာလာရှမ်းကောအသည်းစွဲတွေအတွက် မဖြစ်မနေသွားစားသင့်တဲ့ဆိုင်လေးလို့ အကြံကောင်းလေးပေးပါရစေနော်။ သွားမစားခင်အပြည့်အစုံ လေ့လာချင်သူတွေအနေနဲ့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ Facebook Link လေးကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်။
Number One Facebook
2 thoughts on “မာလာရှမ်းကောစားရင်း အရသာနိဗ္ဗာန်ဘုံဆီ အလည်သွားကြမယ်…….? ?”
David shwe says:
အရမ်းအရသာရှိပြီး ဈေးလဲတန်တယ် စားရတာလဲတန်တယ် လက်ရည်တပြင်စီး စည်းစည်းလုံးလုံးစားချင်တဲ့မိသားစုများရော၊ မိမိချစ်ရသူ ခင်မင်သူချင်းရော တပေါင်းတစည်းတည်းစားသုံးရတဲ့ မာလာရှမ်းကော ပူစပ်ထုံ အစာအဟာရလေးကို ဒီ Number One ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးမှာ သုံးဆောင်အရသာ ခံပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုရယူလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီတိုက်မှာနေပြီး ပထမဆုံး မာလာရှမ်းကောကိုစားကြည့်ယင်း ကြိုက်သွားသူတယောက်ပါ။ စွဲပြီးယင်းစွဲ သွားစေလိမ့်မယ် ။
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ။ ကျေးဇူးပါ